Nezvedu - Andeli Boka Co, Ltd.
Andeli Boka Co, Ltd.., yakavambwa muna 1985, iri munzvimbo hombe yekugadzira yemidziyo yemagetsi yakadzika-pasi yeLiushi China, iyo inonzi "iyo Midziyo yeMagetsi Metropolis yeChina". Andeli Boka Co, Ltd iboka rinotungamira mune yemagetsi indutry, ine kugadzirwa, kwesainzi, kutakura, kupinza uye kutengesa kunze kwenyika, kudyara. Isu tiri boka rakakura risina matunhu mashoma, muchinjikwa-maindasitiri muChina. Andeli ane makambani gumi nemaviri akabata muShanghai, Hunan, Zhejiang, UAE uye anopfuura 300 makambani anoshanda. Andeli ane pamusoro pevashandi vanopfuura 3000 vane zviwanikwa zveUS $ 150,000,000 mu235,000 mativi emamita. "ANDELI" chiratidzo chinozivikanwa sechimwe chezviratidzo zveChinese zvinonyatsozivikanwa. Andeli anoona mhando yezvigadzirwa sehupenyu. Takapfuura ISO9001: 2000 Quality Management System, Mesure Detection System, Standardization System Certification uye "CCC" yezvose zvigadzirwa mumusika. Isu takapfuurawo ROHS, CE, CB, SIMKO, KEMA uye zvichingodaro kune dzimwe nyika zvitupa. Isu tinogadzira uye tinotengesa zvakanyanya kupfuura mazana matatu akateedzana, anopfuura 10000 mhando mune yakakwira-uye-yakaderera magetsi magetsi mudziyo, yakakwana midziyo, simba shanduri, tambo newaya, chiridzwa nemamita, michina yekumonera, inorumbidzwa nevose vashandisi. Chiverengero chitsva chakazvimirira chehungwaru chivakwa kodzero, zvishandiso zvine hungwaru zviri kufamba zvichipinda mumusika.Tiri kuchengeta mabhizinesi edu misimboti ye "Kusvika kune vekutanga-kirasi manejimendi, kugadzira zvigadzirwa zvemhando yekutanga, zvichipa iyo yekutanga-kirasi sevhisi". Vese vashandi veAndeli vari kushanda nesimba uye vanogara vachigadzira. Honest Andeli anogamuchirwa kune vese vashandisi kurwisa zvirinani mangwana ruoko rwakabatana.
Kuitwa kwe "6S" pane-saiti manejimendi uye kurongedza kugadzirwa kwemaitiro, uye simbisa manejimendi ekugadzira maitiro kuona kuti yega yega maitiro mukugadzirwa inogona kusangana nezvinodiwa zvehunhu chigadzirwa kuona zerodefect zvigadzirwa, saka zvigadzirwa zvedu zvakaverengerwa mukati iyo yekugadzira processexcellentquality uye inogona kukosha. Iyo kambani yakagadza mhando yeinjiniya sisitimu yakavakirwa pahunhu hweyese nzira yekufunga "mhando kuziva kunoenderera kuburikidza neese maficha emugadziri.
Chigadzirwa chigadzirwa inyaya yekusingaperi, asi zvakare chakakosha chinhu kumabhizinesi anoenderana nemusika. Chikamu svetuka yepasi rose yemakambani tarisiro, ichave iri mhando yezvigadzirwa kubva pazuva rekugadzwa kweiyo yakanyanya yemakambani hupenyu kutungamira basa. Iyo kambani yakagadzika seti yemhando yepamusoro mhando kuverengera mhando yezvigadzirwa kubva kune akati wandei maficha, kusimudzira yakanakisa mhando vanoziva vashandi, mubatanidzwa weyakagadzirwa mhando manejimendi uye tsika yemakambani kuverengera zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinowanikwa kune vashandisi.
Mutengi kudiwa kwakavakirwa kugadzirwa manejimendi, kuenderera kuvandudzika, mhando sisitimu, gadzira mushandisi kugutsikana "mhando mutemo pasi pekutungamira kwemabhizinesi kuburikidza neiyo ISO9001: 2000 yemhando system chitupa, uye yakapihwa iyo" China yakanakisa mhando, "mhando manejimendi akakodzera mayuniti", " dzakavanzika tekinoroji mabhizinesi muZhuzhou Guta "uye mamwe anokudzwa, Chikamu svetuka zvigadzirwa zvese iIEC uye dzakawanda nyika dzemabhizimusi magetsi emagetsi ekugadzira neCCC yenyika inosungirwa chigadzirwa chitupa.
Vakatendeseka uye vakatendeka, vane tarisiro uye vanofambira mberi, vanoshingairira uye vanoita basa, vanowirirana uye vakabatana "ndiyo tsika yedu yebhizimisi. Zvinotifadza kuva neboka revanhu vakatendeseka, vakavimbika, vane mutoro, vanoshingaira, uye vanoda kuenda kumberi. Mushure mekujoinana naAndeli , Vazhinji vevashandi vedu vaizogara mumhuri hombe kwenguva yakareba kwazvo.Ndosaka tichigona kunyatso kuunganidza uye kuendesa zviitiko zvedu nehunyanzvi.Kugadzikana kwevashandi vedu zvakare chinhu chakakosha icho Andeli anokwanisa kuchengetedza mhando yezvigadzirwa. yakatsiga kwazvo.